Fampiharana maimaim-poana 5 mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Fampiharana maimaim-poana 5 mandritra ny fotoana voafetra
Mbola averinay indray ny tatitra fampiharana izay azo sintonina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ity indray mitoraka ity dia tsy hampahafantatra anao ny lalao misy maimaimpoana izahay, satria rehefa nahita izay misy dia tsy misy mendrika izany. Na izany aza, raha miresaka momba ny rindranasa isika dia afaka mahita karazany marobe amin'izy ireo, izay ahafahantsika mamorona lisitry ny fiantsenana, mahandro lovia avy amin'ny kolontsaina samihafa, manoratra ny hevitray mahaliana indrindra, mandrefy ny haavon'ny faritra sy mijery ny fiovan'ny rehetra ny vola manerantany.
1 IDEAZ - Tehirizo amin'ny toerana iray ny hevitrao
2 Fiovàna - Taham-panakalo vola / tahan'ny fifanakalozam-bola vahiny
3 Lisitry ny fivarotana enina - Aza adino ny mividy
4 Terrain Radar Altimeter
5 Resipeo eran-tany - Gourmet manerantany
IDEAZ - Tehirizo amin'ny toerana iray ny hevitrao
IDEAZ: Ny fitazonana ny hevitrao amin'ny toerana iray dia misy vidiny mahazatra 0,99 euro.
IDEAZ no fampiharana tsara indrindra hitahirizana ny hevitsika rehetra amin'ny toerana iray, indrindra raha manana eritreritra tsy mampino isika. Ny IDEAZ dia tsy mamela antsika hamorona naoty an-tsoratra fotsiny fa ahafahantsika manampy naoty an-tsary na sary eo amin'ny efijery mba hanehoana hevitra. IDEZ dia manana salan'isa eo amin'ny App Store 3,5 kintana amin'ny 5 azo atao.
Fiovàna - Taham-panakalo vola / tahan'ny fifanakalozam-bola vahiny
Fiovana - Ny vidin'ny mpanova vola / ny fifanakalozam-bola vahiny dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro
Ity rindranasa ity dia manome antsika ny satan'ny vola manerana an'izao tontolo izao amin'ny fotoana tena izy, mety ho an'ireo mpampiasa mandeha tsy tapaka na te-hividy vidiny amin'ny tranokala samihafa eran'izao tontolo izao. Ity fampiharana ity dia manana naoty 4 salan'isa amin'ny 5.
Lisitry ny fivarotana enina - Aza adino ny mividy
Lisitry ny fivarotana enta-mavesatra - Aza adino ny mividy manana vidiny mahazatra 0,99 euro.
Toy ny fitsipika ankapobeny, satria lany ny vokatra samihafa ao an-tranontsika ary mba tsy hatokisana ny fitadidiana, dia matetika no mamorona lisitra izay soratanay izay rehetra ilainay. Grocesy List dia rindranasa iray tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny lisitra, misaotra ireo lisitra samihafa miaraka amina vokatra be dia be, ka hadinonay tanteraka ny vokatra rehetra. Ny Grocery List dia manana salan'isa antonony 3,5 kintana amin'ny 5.
Terrain Radar Altimeter dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro.
Ity rindranasa ity dia mety tsy dia misy ilana azy loatra raha tsy zatra mivoaka an-tongotra an-kalamanjana, na bisikileta, satria mamela antsika hikajiana ny haavon'ilay tany amin'ny fomba marina tsara. Ity fampiharana ity dia manana salan'isa antonony 3,5 kintana amin'ny 5 azo atao.
Terrain Radar Altimeter€ 3,49
Resipeo eran-tany - Gourmet manerantany
Recipe World - Ny Cooks World Gourmet dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro.
Ankehitriny mbola ao amin'ny Krismasy isika, ity fampiharana ity dia hahafahantsika manamboatra lovia maro karazana avy amin'ny firenena sy kolontsaina samy hafa, na amerikanina, karana, meksikana, sinoa, grika, italianina, japoney ... dia kintana 4,5 amin'ny dimy azo atao.
Resipeo eran-tany - Gourmet manerantanymaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana maimaim-poana 5 mandritra ny fotoana voafetra
Ny ambaratonga dimy sarotra indrindra amin'ny Super Mario Run
Ny marina momba ny fandefasana "Exclusive" an'ny Super Mario Run